Mgbe ị na-etinye Nougat na Huawei P9 Lite gị, ọ bụ nọmba nnwale nnwale-igodo? Lee ị nwere ihe ngwọta | Gam akporosis
ndabara | | Huawei, Gam akporo nsụgharị
You bụ otu n'ime ndị mmadụ, mgbe ị na-emelite gam akporo Nougat (B370 n'ihu) na Huawei P9 Lite, ewu nọmba ekpe ke ule-igodo mgbe n'ezie ọ bụ otu ọ ga - esi bụrụ ndị beta beta nke Huawei? Ọtụtụ mgbe, mgbe ị na wụnye ngwanrọ nke akwadobeghị ma emesia edebanye aha na nke a na emekari, mana odighi mkpa ichegbu onwe ya, o nwere ihe ngwọta.
Ya mere, n’isiokwu a ka m ji kuziere gị ihe esi laghachi na gam akporo Nougat nwere ule-igodo gam akporo Marshmallow nke mere na ị nwere ike ịnwale ọzọ iji wụnye gam akporo Nougat n'ụzọ ziri ezi ebe ọ bụ na ihe na-akpata njehie a bụ ịwụnye ngwa ngwa na-ezighị ezi.
1 Nzọụkwụ ndị gara aga tupu ịmalite
2 Wụnye ngwugwu dị n'etiti
3 Ntinye Marshmallow (C432)
Nzọụkwụ ndị gara aga tupu ịmalite
Mee ka ekwentị kwadoro ma ọ dịkarịa ala ruo 60%
Dị ka m kọwara na isiokwu ndị bu ụzọ, nke mbụ n'ime ihe niile ga-abụ mee nkwado ndabere site na faịlụ anyị dị ka usoro ụlọ ọrụ usoro na-eweghachi ekwentị niile.
Wụnye ngwugwu dị n'etiti
Faịlụ a anyi ga eji ya dika akwa inwe ike ịwụnye Marshmallow ọzọ. Cheta na Mee nọmba nke mmelite a bụ C900B300.
Bụ na Nougat, anyị mepụta folda na SD akpọrọ dload, anyị na - emeghe faịlụ ma tinye ya na folda anyị mepụtara. E mechara, anyị gbanyụọ ekwentị wee pịa Mpịakọta-, Mpịakọta + na Ike y ekwentị ga-amalite nwụnye na-akpaghị aka.
Ozugbo ọnụ amalite, lelee na nọmba ụlọ ahụ bụ C900B300 Iji soro usoro a, atụla ụjọ n'ihi na ọ bụ ihe nkịtị.
Ntinye Marshmallow (C432)
Anyị na-ebudata nke a Marshmallow firmware, M n'echiche m, m ga-etinye C432B160 ebe ọ bụ na ọ naghị enye nsogbu n'ụdị ọ bụla, ndị ọzọ na-enye nsogbu na ọrụ Google ma hapụ mobile enweghị ike ịmanye onye ọrụ ịwụnye Firmware ọzọ na-enweghị nsogbu ahụ.
Anyị mepụtara folda na SD a na - akpọ dload, anyị na - emeghe faịlụ ahụ ruo mgbe akpọrọ ya UPDATE.APP ma anyị chekwaa ya na folda anyị mepụtara. Mgbe ahụ, anyị gbanyụọ ekwentị anyị wee malite mweghachi na otu nchikota bọtịnụ ndị anyị jibu na mbụ Mpịakọta-, Mpịakọta + na Ike. Mweghachi ahụ ga-amalite na akpaghị aka na anyị ga-enwe Android Marshmallow iji wụnye gam akporo Nougat emesịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Igodo-igodo na nọmba ụlọ mgbe ị wụnye Nougat na Huawei P9 Lite? Lee azịza ya
ndewo, emeela m ihe mbụ ma mkpokọta ahụ agbanwebeghị .. ọ ka bụ igodo-ule ……… .. wdg.
Enwere m P9 Lite VNS L31 ma o doro anya na emehiela m ma wụnye mmelite nke P9 EVA-09. (Ana m enweta mgbe m gafere ya site na dc unlocker)
Ugbu a, m nwere nwa ihuenyo na-acha ọbara ọbara akwụkwọ ozi Ngwaọrụ gị emezighị nkwenye… ..
Site n'ebe ahụ ọ naghị eme ihe kachasị m nweta bụ ịbanye ụlọ nrụpụta / nhichapụ ihuenyo.
M na-enye ụlọ nrụpụta ihe (ya na mmelite nke p9 lite n'ime folda dload na sd) yana 6% ọ kwụsịrị, mkpọtụ uhie na-apụta.
M na-agbalị ime ya site na iji ADB iwu (fastboot niile Kpọghe) ma m ga-esi n'ime ime: iwu na-agaghị ekwe.
Amaghị m ihe m ga-eme ọzọ, aro ọ bụla?
José otu ihe ahụ mere m ma echere m na agaghịzi m enwe ike idozi ya, otu m siri dozie ya bụ site na nbudata Rollback, agbalịrị m 2 na ọ bụ nke abụọ na-arụ ọrụ n'eziokwu m gbalịrị ọtụtụ oge na roms ndị ọzọ chọrọ ịwụnye ha na bọtịnụ atọ mana dịka ị na-ekwu na a kpọchiri ya mgbe m chọrọ ibu. Gbalịa ibudata Rollback nke android 6, ọ ga-eweghachi nke ọma, wee mepee OEM ma wụnye TWRP mgbake ka ị wụnye android 7
Zaghachi CESAR ABAD RODRIGUEZ SALAS
Achọrọ m enyemaka dị ukwuu enwere m Huawei Mate 9 lite Bl-l23 nke m na-emelite ya na nougat (NRD900M, igodo ule). na mgbe ọ bụla m malitegharịrị m ga - enweta ihe dị ka »ngwaọrụ gị adaala» Abụ m onye Peru m nwere ike inyere onwe m aka biko kọwaa ihe kpatara na anaghị m aghọta nke ọma, gbaghara m.
Zaghachi Miguel l
nsogbu m bụ na mgbe emelite (na ụdi ike outage) cel, ọ bụ na mkpokọta NRD90M ule-igodo. Ọ na-ekokwasịkwa mgbe mgbe. Achọrọ m ịlaghachi na mkpokọta m nwere site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe; Amaara m ihe ọ bụ; Ebe ọ bụ na ndị Hisuite, ana m edebe nkwado «update.zip.dbk» nke ROM mbụ ahụ, mana enweghị m ike ịlaghachi na nke ahụ site na HiSuite ... ọ na - egosi «ngwaọrụ ahụ anaghị akwado mgbake usoro» ya bụ, ọ na-egbochi ohere nke Hi-ụlọ
N'agbanyeghị ebe a (Unreleased), egwuregwu gam akporo na-ezu ike
Download Flippy Hill, the Crossy Road ịke egwuregwu nke agaghị ekwe omume cartwheels